Riripo Bhatani Rinotevera? | Martech Zone
Kushandisa isainzi, asi zvimwe zvacho ndezvomusikirwo. Ndinoyeuka ndichiita nharo zhinji nevanhu nezve usability pandakashanda seManeja Chigadzirwa. Kune zvimwe zvinhu zvinopihwa - senge maziso anotarisa nepadivi pechiso (kuruboshwe kuenda kurudyi), marongero avanotsika pasi, uye matarisiro avanoita chiito pazasi kurudyi.
Kwete yakawanda sainzi inosanganisirwa, zvimwe zvezvinhu izvi zvese zviri zvechisikigo, uye zvimwe zvacho zvinowanzoenderana nemaitiro apfuura mukufambisa pamhepo.
Manheru ano tine shamwari yemwanasikana wangu apfuura, saka ndafunga kuodha online kubva Dominos. Webhusaiti yavo nyowani ndeye zippy - zvinoita kunge zvese Java. Iyo inofadza graphical kune ziso, uye inokurumidza. Yakanaka kwazvo kupfuura Pizza Hut kana Papa John's ... uye inoshanda, kusiyana neyaDonato.
Re: Donato's: Mwedzi yakati gare gare uye ndinofunga ndakave nemiedzo gumi nemaviri kwandisingakwanise kuodha nekuda kwekunonoka kwayo kana nekuda kwehukuru hweNET chikanganiso.
Ini ndawana imwe yakajeka nyaya nekushandisika kwenzvimbo, zvakadaro. Tarisa uone ichi skrini uye fungidzira uri kuchizadza
Mushure mekuzadza ruzivo rwako, maziso ako anoteedzera - uye tarisira - kufambira mberi kune inotevera skrini nekudzvanya kurudyi. Ini ndaifanira kutsvaga kwechinguva ndisati ndawana rinotevera bhatani. Pfungwa dzangu dzakabatwa nebhatani reKuponi uye munda kurudyi, saka ndakaomerwa nekuiwana.
Imwe shanduko yakapusa inogona kuita kuti peji iri rive nyore uye, ndine chokwadi, kugadzirisa shanduko yevatengi:
Kungofambisa bhatani kurudyi, iko maziso angu paanotarisira kuteedzera, kwaizove kuvandudzika kukuru mune imwe yakanaka interface. Ini ndaizowanawo nyowani ruvara, pamwe girini, kuti ndipe chinoonekwa cue mukati mechikumbiro kusvikira munhu apedza. Chinzvimbo chisingachinjiki, ruvara, uye mukurumbira zvaizopa chiitiko chisina musono chaizotungamira vashandisi kuburikidza nesaiti.
Iko kutsva kuwedzera kune iyo Dominos saiti ndiyo yavo Pizza Tracker:
Chikamu chinonakidza ndechekuti chikamu chimwe nechimwe chinopera mukati nekunze… nechikamu 5 (kuendesa) chiri chikamu chakakura kwazvo. Mune mamwe mazwi, Dominos inogona kunge ichangovaka iyo 30-maminetsi flash faira ine yakakwana yehurefu kuti ive +/- maminetsi gumi nemashanu (fungidziro yangu). Chinyengeri… asi zvinoshanda.
Iko kune kumwe kudyidzana kwechokwadi pane peji - zita remutyairi wekuendesa raivepo imomo nekukurumidza mhinduro uye ratings. Zvakanaka!
Tags: mutengi maginetiDan ZarrellaKubatanaKipp BodnarMaya Grinbergmupepanhauspamkusazvinyorakukosha kwe infographicchii chinonzi infographic
Kukadzi 21, 2008 na9: 13 PM
Zvakanaka, ikozvino ndine nzara… dai chete Subway yaununurwa
Feb 22, 2008 at 11:51 PM
Ivo havaendese, asi vashoma vavo vane online odha. Haisi maitiro akanaka, zvakadaro! Ini ndinofanira kunyora bhuku pane avo ekushandisa nyaya.
Kukadzi 22, 2008 na12: 40 PM
Kwete chete kuti handina kuwana bhatani re "Inotevera", kana ndichiritsvaga handina kuzomira kukwevera maziso angu kubhatani rakakura re "ONLINE COUPONS". Kana iwe uchizokwenenzvera kumusoro kwenzvimbo yeinotevera bhatani / chinongedzo, usazvichere pachako zvakadzama nekusanganisira hofori tsvuku bhatani kumwe kunhu pachiratidziri.
Kukadzi 22, 2008 na4: 20 PM
Iyo inotevera bhatani inyaya hombe. Ini ndanga ndiri kumasayiti kumberi kwaive kwakaomarara kufamba (nekuda kwekushongedza dhizaini) kuti ini ndangobuda X'd.
Mar 20, 2008 pa 12: 22 PM
Ini ndine zvimwe zvemukati info pane izvi uye Tracker ndeyechokwadi - iwo kiyi kuDomino yemukati yekuodha system yavanoshandisa kuteedzera kugona. Chaizvoizvo +/- 40 masekondi.